Odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland oo hadal kasoo saaray go’aankii ra’iisul wasaaraha (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland oo hadal kasoo saaray go’aankii ra’iisul wasaaraha (AKHRISO)
Siyaasiyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda deegaanadda gobolada waqooyi ee maamulka Somaliland ayaa qaadacay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada uu dhawaantaan ku dhawaaqay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
War-saxaafadeed kasoo baxay siyaasiyiinta ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanadda Somaliland ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in magacaabidda guddigan ay tahay cadaalad darro sii kordhineysa tacadigii lagula kacay dhinacooda.
Siyaasiyiintaasi iyo odayaal dhaqameedka Somaliland ayaa mar kale ku celiyay inay bannaanka ka taagan yihiin doorashada 2016-ka islamarkaana aanay ka qeyb gali doonin doorashadaasi ilaa la xaliyo cadaalad darrada jirta.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war-ah oo kasoo baxay ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid uu kaga jawaabayo cabashada ay soo jeediyeen siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaan ahaan kasoo jeeda Somaliland balse ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka ay soo saareen siyaasiyiinta iyo odayaashaas:-
Al Shabaab overtook Boko Haram as Africa’s most deadly terror group in 2016